पतिलाई डिर्भोस दिएर एकल जीवन बिताइरहेकी रिमाले बल्ल दिईन मुख भरिको जवाफ, कसरी यस्तो अवस्थामा पुगीन् ? – Gazabkonews
पतिलाई डिर्भोस दिएर एकल जीवन बिताइरहेकी रिमाले बल्ल दिईन मुख भरिको जवाफ, कसरी यस्तो अवस्थामा पुगीन् ?
फिल्म र म्यूजिक भिडियोमा पनि काम गर्दै आएकी उनी अभिनित फिल्म ‘मिस्टर नेपाली’ केही पहिले रिलिज भएको थियो । तर उनले अभिनय भन्दा बढी चर्चा रियालटीशोबाट पाउने गरेकी छन् । अभिनय होस् वा रियाटली शो उनी जहाँ रहेपनि मिडिया तथा प्रशंसकको एउटा प्रश्न भने सधैँ तेर्सिने गर्दछ – विवाह कहिले गर्ने रु